Tahriibayaal ku xiran Liibiya ” Waxaa na heysta Cunno la’aan, Biyo la’aan, Musqul la’aan & Daryeel xumo”. | Dayniile.com
Home Warkii Tahriibayaal ku xiran Liibiya ” Waxaa na heysta Cunno la’aan, Biyo la’aan,...
Tahriibayaal ku xiran Liibiya ” Waxaa na heysta Cunno la’aan, Biyo la’aan, Musqul la’aan & Daryeel xumo”.
Kumanaan ruux oo Qaxooti ah oo intooda badan Liibiya u tagay in ay uga sii tahriibaan Qaaradda Yurub ayaa sheegay in ay lasoo deristay dhibaatooyin dhinaca Nolosha ah oo aan wax laga qaban muddo dheer.
“Cunno la’aan, Biyo la’aan, Musqul la’aan & daryeelka Caafimaadka ayaa nagu liita, waa in nalaga qaadaa Liibiya” waa ereyada ay ku dhawaaqayeen Qaxootigaan u kala dhashay Dalalka kala duwan.
Saddexdii Todobaad u dambeysay waxa ay qoysaskaan Hay’adaha hoostaga Qaramada Midoobay u bandhiganayeen in laga qaado waddankaan dhaca Waqooyiga Afrika ee silica ku heysto sida ay hadalka u dhigeen.
Nin u dhashay Dalka Eretareeya kana mid ah Qaxootiga ku dhibaateysan Liibiya ayaa Teleefishinka Aljazeera u sheegay in “Cunno, Biyo, Musqul & Dawo aanay heysan” Sidaasina ay naftooda ula baqayaan in ay khatar wajahdo.
Fatima waxa ay kamid tahay Dad ka yimid Suudaan oo xad lama degaan ah la wadaago Liibiya, waxa ay dalbatay in dib loogu celiyo Dalkeeda Hooyo maadaama waxa ay aragtay ay ka duwan tahay nolosha ay ka aaminsaneed Tahriibka.
Xusuustooda kama go’in 9-kii October 2021 Dadkii lagu hortaagtay kaddib markii ay ka baxsadeen goobta lagu hayay, waxaa maankooda kusoo dhacaya rasaasta xooggan oo ay maqlayeen taas oo loo xaqiijiyay in ay ku dhinteen Dad xerada la joogay.
Maxamed Cumar oo reer Suudaan ah ayaa dhankiisa sheegay in Xabsiyada ay kala kulmaan “Tacadi & Ciqaab” oo ay u dheer yihiin dhibaatooyinka nololeed sida aysan helin waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha.
Tahriibayaasha nasiibka u yeesha in ay raacaan doomaha waxa ay la kulmayaan halis ka weyn tan Xabsiyada oo waxaa dhowrkii todobaad ka rogmaday Doomo ay raaceen, kuwo ayaa dhintay halka qaar kale lasoo badbaadiyay.
Liibiya & Hay’adaha hoostaga Qaramada Midoobay weli si dhab ah uma shaacin Dalalka ay u kala dhasheen Tahriibayaashaan marka laga reebo shaqsiyaad uu wareystay Teleefishinka Aljazeera oo dhalashooda shaaciyay.
Waddamada ugu badan ee Tahriibayaasha kasoo jeedaan waa Soomaaliya, Itoobiya, Eretareeya, Suudaan & Dalal kale oo u badan Qaaradda Afrika iyaga oo aaminsan in haddii ay ku guuleystaan safarkooda halista badan ay helayaan nolol uga wanaagsan tan waddamadooda.
Previous articleXildhibaan Fidaar: “Cabashada Shacabka Hargeysa waa mid u baahan in wax laga qabto”.
Next articleBarcelona Oo Gashay Tartanka Mbappe & Qoddobka Suurogalin Kara Inay Real Madrid Ka Af-Duubato Saxeexiisa